Mikotrana | May 2022
Tena > Mikotrana
jordan spieth fanatanjahan-tena
Jordania manao fanatanjahan-tena amin'ny fomba fikirakirana
Ohatrinona ny karama azon'i Jordan Spieth isan-taona? Satria ny mpilalao sasany mora vidy ary ny caddies ihany no miova paosy, tsy midika izany fa miaina amin'ny nickel sy dimes daholo ny caddies. Tamin'ny taona 2015, nahazo ny loka 1,8 tapitrisa dolara amerikana ilay mpandresy US Open, Jordan Spieth. Ny kaddy Michael Greller dia nanangona $ 180,000 ho an'ny zava-bitany tamin'ny fifaninanana.
Fanatanjahan-tena Watts - ahoana no hamahana izany
Firy watt no fampihetseham-batana tsara? Amin'ny ankapobeny, ny bisikileta vao manomboka dia mety ho eo amin'ny 75100 watt eo ho eo ny fampiofanana mandritra ny adiny 1. Ny mpandray anjara sahaza dia mihoatra ny 100 watt eo ho eo, ary ny mpitaingina bisikileta pro dia mety hahatratra 400 watt isan'ora.
Fiofanana amin'ny alàlan'ny fampiofanana - mamaly ireo fanontaniana
Mety ve ny fampihetseham-batana amin'ny fampihetseham-batana? Azo atao ny manao fanatanjahan-tena amin'ny alim-bolo, raha manamaivana ny hamafiny ianao, raha ny filazan'ny mpanazatra manokana. Mety hahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa aza. Ary ny alikaola amin'ny antonony dia mety tsy hanelingelina ny tanjonao amin'ny ankapobeny, hoy ny fikarohana.
fampihetseham-batana sarotra aorian'ny fampiofanana
Ny karbaona sarotra dia mametraka fampiofanana - mitady vahaolana
Inona ny karbaona tsara indrindra hohanina aorian'ny fampihetseham-batana? Ny ovy, voamaina, ary voankazo dia mety misy gliosida mahasalama be, toy ny quinoa. Ny Quinoa dia tsy misy gluten, sokajiana ho pseudocereal, ary matetika lanina toy ny voa. Be fibre izy io ary manankarena proteinina, miaraka amina kaopy 1 manome 8.14 g.
fanatanjahantena momba ny fasika
Fanatanjahan-tena amin'ny fasika - ahoana no hanapahanao hevitra
Inona no ataon'ny fanatanjahan-tena? Fasika dia fitaovana fampiofanana tsara hanatsarana ny hafainganana sy ny hakingana. Manome fanoherana izay manohitra ny hozatrao izy, manampy anao hahatonga anao ho haingana sy hipoaka. Ny fiovana tsy tapaka eo ambanin'ny tongotrao dia misy hozatra stabilizer kely izay manatsara ny fandanjalanjana sy mampihena ny lozam-pifamoivoizana. 29. 2012.
drafitra fampiofanana amin'ny ririnina
Drafitra fampihetseham-batana amin'ny ririnina - ny fomba fanamboarana
Inona no fanatanjahan-tena mety amin'ny ririnina? 'Makà dimy ka hatramin'ny 10 minitra ary manaova fanatanjahan-tena aerobika ambany toy ny jogging amin'ny toerana na manao jacks jumping,' hoy ny toroheviny. 'Amin'izay, rehefa mivoaka any ivelany ianao dia efa mafana.' Ny fitafiana araka ny tokony ho izy dia afaka manampy koa. Manaova sosona hahafahanao mamoaka azy ireo rehefa miakatra ny mari-pana amin'ny vatanao.16.01.2004
fanazaran-tena indroa isan-kerinandro
Fanatanjahan-tena indroa isan-kerinandro - vahaolana mety
Mety ve ny manao fanatanjahan-tena indroa isan-kerinandro? Saingy nilaza i Mans fa ny fampiofanana indray mandeha na indroa isan-kerinandro fotsiny dia tsy hanome anao mihoatra ny haavo ambany. Tokony hampiofana farafahakeliny intelo isan-kerinandro ianao, raha te hahatratra ny tanjona ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana mandritra ny fotoana voafaritra tsara, ary ho salama sy ho salama hatrany, hoy i Mans manazava.
fanatanjahan-tena hozatra stabilizer
Fanatanjahan-tena hozatra stabilista - fanovozan-kevitra feno
Ahoana no hampiofanana ny hozatra mampiorina? Ny fomba tsara indrindra hanamafisana ny fanamafisana anao dia ny fanaovana fanatanjahan-tena miadana, amin'ny fampiasana lanja ambany ary amin'ny fanaovana famerimberenana avo kokoa. Ankoatr'izay, tsy maintsy ilaina ny mifantoka amin'ny fametrahana toerana sy ny fampifanarahana, ka izany no antony tokony hanazatrazanao miadana.
tsy afaka matory aorian'ny fampihetseham-batana
Tsy afaka matory aorian'ny fampihetseham-batana - ahoana no hamahana izany
Fa maninona aho no tsy afaka matory aorian'ny fanazaran-tena? Betsaka ny olona no mahatsapa fa ny adrenaline navoaka nandritra ny fampihetseham-batana mahery vaika dia nanodina ny ati-dohany ho be loatra, ka sarotra ny matory aorian'ny fampiasan'izy ireo. Ary raha izany tokoa, raha ianao no izy, ataovy foana ny fanazaran-tena ataonao amin'ny maraina na maraina be.
inona no hosotroina alohan'ny fanazaran-tena
Inona no hosotroina alohan'ny fampiofanana - vahaolana mety
Inona no zava-pisotro tsara indrindra alohan'ny fampihetseham-batana? Zava-dehibe amin'ny fampisehoana ny rano. Soso-kevitra ny hisotro rano sy zava-pisotro misy sôdiana alohan'ny fampiharana mba hampiroboroboana ny fifandanjan'ny tsiranoka ary hisorohana ny fahaverezan'ny tsiranoka be loatra.
fahazarana amin'ny fampihetseham-batana
Fahazaran-tsakafo - vahaolana pragmatika
Inona avy ireo fahazarana manao fanatanjahan-tena tsara? Tanjona tsara ho an'ny olona maro ny miasa mafy manao fanatanjahan-tena in-5 isan-kerinandro mandritra ny 30 ka hatramin'ny 60 minitra iray. Raha toa ka sarotra amin'ny 30 ka hatramin'ny 60 minitra isaky ny mandeha ao anaty fandaharam-potoana be atao ianao, dia azonao atao ny manasaraka ny fiasa ara-batana ho lasa kely kokoa amin'ny fotoana.7. 2020.